Ihamba phambili futhi iholele i-Odisha Tour Operators- I-Sand Pebbles Tours
Amakhulu ezinkulungwane zezivakashi azama e-Odisha unyaka ngamunye ukuze avakashele isayithi layo elimangalisayo lomlando, izenzakalo zenkolo nezendawo ezinhle kakhulu. Ikhamphani yezokuvakasha yendawo enolwazi futhi ekwazi ukuthola ukuvakasha kwe-Odisha, Izinkambo Zezintambo Zesihlabathi, isiza izivakashi ukuba zihlole futhi zibone i-Orissa iminyaka engaphezu kwengu-15. Ukuhola Odisha tour operators futhi umhlinzeki wephakheji we-Orissa wekhefu unikeza izinhlobonhlobo zezivakashi nezinkambo kuzo zonke izingxenye ze-Orissa lasendulo.
Enye yezindlela ezithandwa kakhulu ukubona zonke izikhangisi zinezikhungo amaphakheji ezokuthutha ezokuvakasha. Lezi ziphakheji zihlanganisa usuku lwesigamu noma ukuvakasha kwendawo yosuku olugcwele kwelinye lezimoto zokuvakasha ezikhethwe kakhulu futhi ezigcinwe kahle. Kusuka kuma-sedan okunethezeka emibhangqwaneni noma emaqenjini amancane kuya emaqenjini amakhulu okuvakasha amaqembu abantu abafika ku-45 abantu, zonke izimoto zomoya ophethwe umoya we-Sand Pebbles Tours zihlushwa yibo abaqhubekile abanokuhlangenwe nakho nabaqeqeshiwe abajabule ukwabelana ngolwazi lwabo lwendawo indlela.
Ukuze kube lula amakhasimende ayo, ukubhuka imoto kungenziwa kwikhompyutha ku-website yeSand Pebbles - abaqhubi be-Odisha abahamba phambili, ngaphezu kwamahora we-24 kusengaphambili. Amakhasimende azothola isiqiniseko esizenzekelayo sokubhuka kwabo kanye nomunye umyalezo ngokuqondene nemoto ethile kanye nomshayeli wezimoto ngaphambi nje kokuhamba kwamahora amabili. Yonke indawo yokuqasha ihlanganisa iphephandaba lansuku zonke, amaminerali, ibhokisi leqhwa, nesambulela. Ezinye iziqhumiso zitholakalayo ngenkokhelo eyengeziwe.
With amazinga omzuzu wesigamu ukuqala njengezinga eliphansi njenge-850 INR, izinqola zesihlabathi zezimoto zokunethezeka zikhona amahora angu-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto ukuhamba ngezinyawo, ukuvakasha okuqondiswayo, imishado, imisebenzi yomndeni, imicimbi yenkampani, ukuhamba kwebhizinisi, noma ukuthutha esiteshini sezindiza ukuya ehhotela futhi emuva.
Uhlangabezana no-Odisha njenganini ngaphambili. Nge Izinkambo Zezintambo Zesihlabathi ukuhlinzeka ngokuhamba okuthembekile, izivakashi e-Odisha zingakwazi ukuphumula futhi zijabulele yonke indawo, izindawo, kanye nemisebenzi yalo mkhakha wemilingo.
I-Best Car And Coach Rental Company Inkampani yakwa-Odisha